218s ရော်ဂျာကျောက်ခေတ်ဂျူရီလူကြီးရဲ့ anti-Trump လူမှုမီဒီယာပို့စ်များကိုပေါ်လာ images and subtitles
Buck 166. Nike, BIG တရုတ်မေ့လျော့မသွားပါနဲ့ NIKE, BIG China Exposure ကိုမမေ့ပါနဲ့။ ထိတွေ့ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တွင်တစ်ဆယ့်လေးယောက်မြောက်လူတစ်ယောက်ရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ROGER ကျောက်တုံးဖြစ်သည့်ဂျူရီတွင်တစ်ဆယ့်လေးယောက်မြောက်လူတစ်ယောက်ရှိသည် ဂျော်ဂျီရွန်းကျောက်တုံးအမှု၌၎င်းသည်ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်သည် သိသာထင်ရှားတဲ့ဘက်လိုက်မှု, အခြားအရာခပ်သိမ်းနှင့်ဒီ IS IS ထည့်သွင်းခဲ့သည် အခြားအရာအားလုံးနှင့်ဤအရာသည်တရားမျှတမှုအတွက်ကောင်းကျိုးအတွက်မျှော်လင့်ခြင်းမဟုတ်ပါ တရားရေးဌာနအတွက်ကောင်းကောင်းမရှာဘူး ဌာန။ TWEET တုံ့ပြန်မှုလာ အသစ်ထပ်မံပေါ်ထွက်လာသောလူမှုမီဒီယာ POST အပေါ်တုံ့ပြန်မှုသည်နှစ်ဆဖြစ်သည် လူသစ်ကိုပြသသည့်လူမှုမီဒီယာအသစ် - အသစ်ထုတ်လာသောလူမှုမီဒီယာ လူကိုပြသသောဂျူရီ၏ ယခင် TRUMP အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အားသပိတ်မှောက်သောဂျူရီ၏စွဲချက် ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များတွင်ယခင်ကသိမ်းထားခဲ့သောအကြံပေးကျောက်တုံးကိုသုံးထားသည် ဆောက်လုပ်ရေးဌာနမှကျောက်ခဲသည်ဒီနည်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီလူကိုဆန့်ကျင်။ ပုဂ္ဂိုလ်။ Arizona SENATOR မာသသို့လာ ARIZONA SENATOR MARTH MCSALLY, SENATOR, သူတို့နေဆဲပါ MCSALLY, SENATOR, သူတို့နေဆဲသမ္မတအားဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားနေ, ငါ သမ္မတကိုဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားနေငါဒီနည်းကိုစဉ်းစား - သူတို့ဖြစ်ကြသည် ဒီနည်းကိုစဉ်းစားပါ - သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြိုးစားနေသည် သူ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြိုးစားနေ, သူတို့သည်ပင်စကားပြောစကားပြောနေကြသည် ဒီနည်းကိုကြောင့်ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုပြောနေတာတောင်ငါထင်ရဲ့ ဒီနည်းကိုကြောင့်ငါ BACKFIRE သွားမယ့်ငါထင်သလား Backfire သွားမလား? >> STUART, အိုင်တီရှိပြီးသား >> STUART, အိုင်တီပြီးသားနောက်ကျော, သူတို့ကြိုးစားနေကြပါပြီ နောက်ပြန်လှည့်, သူတို့ကဒီကိစ္စကိုသမ္မတအထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် သမ္မတကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးကတည်းကသူတို့ကိုချဉ်းကပ်ရန်၊ သူတို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရရှိခဲ့ကြပြီ, ရလဒ်ကိုသူတို့လက်ခံကြပြီမဟုတ် ရလဒ်, သူတို့ကသူ့ကိုချပစ်ရန်ကြိုးစားနေသည် သင် Ball ကိုသူ့ကိုထုတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားနေသင်မြင်နှင့်သူတို့အဖြစ် သင်မြင်သည့်အတိုင်း BALLOT သူတို့သည်ကျော်ဖြတ်ပြီးသူတို့ဖြစ်နိုင်မည် တစ်ချိန်ကကျော်ဖြတ်ပြီးသူတို့ကိုင်တွယ်နိုင်, အိုင်တီနောက်ခံ, အိုင်တီကိုင်တွယ်, အိုင်တီနောက်ခံ, ARIZONA ပြည်သူတွေလွတ်လို ARIZONA တွင်နေထိုင်သူများသည်ကုန်ကျစရိတ်နိမ့်ကျသည့်အခြေအနေသို့ရောက်နိုင်သည် နိမ့်ကျသောဆေးဝါးကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ထောက်ပံ့မှု, ထောက်ပံ့ပေး နောက်ထပ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေးသောဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ OR အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုရရှိနိုင်ရန် (သို့) လူများကိုသူတို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း လူတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အလုပ်များကိုသူတို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ် ထွက်နေသောယောဂီများဖြည့်စွက်, အမှုအရာကောင်းကောင်းနှင့် အဲဒီမှာအမှုအရာသွားနေပြီနှင့်ငါတို့လုပ်ဖို့ရှိသည်နောက်ထပ်ရှိပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကွဲပြားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လုပ်စရာများများရှိသေးသည် ဒီနည်းကိုကိုယ်စားပြုတဲ့လူတွေအတွက်ကွဲပြားမှုဖြစ်စေရန် ကိုယ်စားပြုသောဤယောက်ျားများမှာရပ်တန့်နေဆဲဖြစ်သည် ယောက်ျားတွေဟာအန္တရာယ်များတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၊ Syndrom, စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, Impachachment, အိုင်တီရယ်စရာပါပဲ။ Impachment, ရယ်စရာပါပဲ။ စတီးဝပ် - ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြစ်တင်ဝေဖန်မှု စတီးဝပ် - ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမအောင်မြင်သော Impachachment နှင့်ယခုပြောရမည့်စကားလုံး PELOSI သည် ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ယခုအချိန်တွင်စပီကာ PELOSI အောက်ကိုမျှော်ကြည့် သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်၏စီးပွားရေးအပေါ်နိဂုံးချုပ်ရန်မျှော်လင့်လျက်၊ စီးပွားရေးအပေါ်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်, နိုင်ငံရေးကနေအစီရင်ခံစာရှိပါတယ် ဒီနည်းကိုပြောသောနိုင်ငံရေးသမားတစ် ဦး မှအစီရင်ခံစာတစ်ခုရှိသည်, Nancy PELOSI ဒီနည်းကိုပြောတာပါ၊ Nancy PELOSI ကအထူးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ် ရှင်းပြရန်စီးပွားရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် HOSTED အထူး Speaker ၏တွေ့ဆုံ စီးပွားရေးကိုအဘယ်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ရှင်းပြရန်စီးပွားရေးအကြံပေးနှင့်အတူ စီးပွားရေးကိုအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းကြီးထွားစေသည့်အဘယ်ကြောင့်မဖြစ်သည့်အကြောင်းဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ပြောကြားရန် အမှန်တကယ်အားဖြင့်ခိုင်မာတောင့်တင်းခြင်းမရှိဟုပြောဆိုခြင်းနှင့်သူတို့ MIAMI ကိုမည်သို့စွမ်းဆောင်နိုင်မည်နည်း သူတို့မိမိမိကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုနိုင်သလဲဆိုတာကိုစာတိုပေးပို့ပါ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ - မဲဆန္ဒရှင်များကိုအကြောင်းပြန်ပါ၊ မဲဆန္ဒရှင်များ၊ ခင်ဗျားဘာထင်သလဲ။ ဘာလဲ >> ငါအိုင်တီရယ်မောဖွယ်ထင်, ငါ >> ငါအိုင်တီရယ်မောဖွယ်ထင်, သူတို့ထွက်လာရန်လိုအပ်ထင် သူတို့တှငျ DC Bunker ထဲကထွက်ရန်နှင့်နားထောင်ရန်လိုအပ်သည်ထင်ပါစေ DC ရှိ Bunker နှင့် Arizona ရှိအမေရိကန်များနားထောင်ပါ အမေရိကန်များ, Arizona တွင် WE ရပြီကြင်ဖော်မဲ့မိခင်ရှိသည် ရရှိခဲ့ကြသောကြင်ဖော်မဲ့မိခင်, အနိမ့်ဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း HISPANICS, VETERANS, မိဘများ၏ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, အနည်းဆုံးအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ သူတို့၏မိဘများသည်နှစ် ၃၀ သက်တမ်းရှိသောကြောင့်ပျော်ရွှင်ကြရသည်။ သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြောင့်နှစ် ၃၀ သက်တမ်းရှိတဲ့ကလေးငယ်ဟာအိမ်အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့ KID အိမ်မှ ထွက်၍ အမေရိကန်လူမျိုး ၆၀% ကျော်ဖြင့်အလုပ်တစ်ခုရခဲ့သည် အမေရိကန်လူမျိုး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းမြင်သည်ဟုခံစားရသည် တစ်ချိန်ကစီးပွားရေးနှင့်အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းမြင်မှုကိုခံစားပါ စီးပွားရေးနှင့်အနာဂတ်, တစ်ချိန်ကလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်နှင့် နောက်တဖန်, လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်နှင့်မဟာမိတ်များထဲကအတော်လေးရှိပါတယ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာနဲ့မဟာမိတ်တွေများတယ်။ အမေရိကမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ အိုင်တီသူတို့ရယ်စရာပါပဲ သူတို့တစ်တွေတစ်ခုခုမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖို့ကြိုးစားနေရယ်မောဖွယ်ပါပဲ ကွဲပြားခြားနားသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုကြိုးစားနေ။ ကွဲပြားခြားနား။ စတီးဝပ် - ငါထဲကတစ်ဆယ့်နှစ်အရွယ် စတီးဝပ် - သမ္မတတစ် ဦး မှတစ် ဦး မှာကျွန်ုပ်သည်သင်၏တစ်ယောက်ထဲမှ သင်၏အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာများအနက်မှတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်ဖတ်မည် အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာများ, ငါအဆုံးသတ်, သင်တို့အဘို့အ TWE ဖတ်ပါလိမ့်မယ် သင်တို့အတွက်နှစ်ဆ, အံ့သြဖွယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာငွေတောင်းခံရွှေ့ရွေ့ အံ့အားသင့်စရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာငွေတောင်းခံမှုများရှေ့ဆက်အတွက်, ကွန်ဂရက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BIPARTISAN ငွေကိုငါ့ဆီပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BIPARTISAN BILL ကိုကျွန်ုပ်၏စားပွဲသို့ပို့ခြင်း၊ DESK, ငါသိ, အထွေထွေ, သငျသညျအနိမ့်ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးချင်တယ် ပိုမိုနိမ့်သောဆေးညွှန်းသတ်မှတ်ထားသောမူးယစ်ဆေးဝါးစျေးနှုန်းများအတွက်၊ သင်အဆုံးသတ်လိုသည် စျေးနှုန်းများ, သင်သည်အံ့သြစရာကုန်သွယ်မှုအဆုံးသတ်ချင်, ကြည့်ရှု MY ဒီနေရာမှာဖြစ်ပျက်သောအခါငါအံ့သြစရာငွေတောင်း, ကြည့်ရှု, ငါ့မေးခွန်းဖြစ်ပါသည် ဒီနည်းကိုဖွစျလာတဲ့အခါမေးခွန်း IS သင်ရနိုင်သလား ဖြစ်ပျက်ရန်, သင်ယခုကွန်ဂရက်မှတဆင့်အိုင်တီရနိုင်သလား? အခုတော့ကွန်ဂရက်တဆင့်? >> WE မှတဆင့်အိုင်တီရရန်ရှိသည် >> WE အိုင်တီရရှိရန်ကွန်ဂရက်, စတီးဝပ်။ ကွန်ဂရက်, စတီးဝပ်။ စတီးဝပ် - မင်းလား။ စတီးဝပ် - မင်းလား။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလုပ်နိုင်သည် >> ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံးဝဖြစ်နိုင်သည်၊ လူနာတစ် ဦး သည်လူနာတစ် ဦး နှင့်သဘောတူနိုင်လျှင်၊ \_ t လူနာတစ် ဦး သည်လူတစ် ဦး သို့ရောက်သောအခါအတည်ပြုနိုင်သလား တစ် ဦး ချင်းအရေးပေါ်ခန်းသို့သူတို့သွားရမယ့်အရေးပေါ်အခန်း သူတို့ကမပေးသင့်သောအရေးပေါ်အခန်း, $ 10000 လ အာမခံအတွက်ကြောင့်ဒေါ်လာတစ်သောင်းနောက်ကျသောငွေတောင်းခံလွှာကိုမယူပါနှင့် နောက်ပိုင်းတွင်အာမခံကုမ္ပဏီများနှင့်ပေးသွင်းသောကြောင့် ကုမ္ပဏီများနှင့်ပေးသွင်းသူများသည်ကွန်ယက်အတွင်းမှထွက်မထုတ်နိုင်ပါ ကွန်ယက်အတွင်းပိုင်းအခြေအနေကိုမရှာဖွေနိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အခြေအနေ, ငါအိမ်သူအိမ်သားဆုံးရှုံးနှင့်အိမ်ရောင်းရောင်းသောသူကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးပါပြီ သူ့အိမ်ကိုဆုံးရှုံးပြီးအိမ်ရောင်းရန်ဤစာစောင်တွင်; အိုင်တီအတွက်အချိန်ပါပဲ ဒီစာစောင်ကျော်; ငါတို့အတွက်လှုပ်ရှားဖို့အချိန်တန်ပြီ၊ ဒီငါဟာငါပါ ရွေ့လျားဖို့အမေရိကန်, ဒီနည်းနဲ့ငါက Cassidy ရဲ့ပံ့ပိုးသူပါ CASSIDY BIPARTISAN ငွေတောင်းခံလွှာ၏ကမကထပြုသူ၊ BIPARTISAN ငွေတောင်းခံလွှာ, သမ္မတရဲ့အနုပညာနှင့်အဆုံးအပေါ်အိုင်တီရယူပါ သမ္မတ၏ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပြီးဆုံးသွားသောငွေပမာဏ။ အံ့သြစရာငွေတောင်းခံ။ စတီးဝပ်။ ငါအိုင်တီအဆုံးသတ်ရမယ် စတီးဝပ်။ ကျွန်ုပ်သည် SENATOR ကိုအဆုံးသတ်ရမည် SENATOR, ငါမပြုမီ, ငါသည်သင်တို့ကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်တယ် သင့်အားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရန်ဤသတင်းထောက်အားတုံ့ပြန်မှုများစွာအတွက် မိုက်ကရိုဖုန်းကိုထိုးဖောက်နေတဲ့သတင်းထောက်ကိုတုံ့ပြန်မှု သင်၏မျက်နှာတွင်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုအဘယ်သူတိုက်ခိုက်နေသနည်း။ သင်၏မျက်နှာနှင့်သင်သူ့ကိုခေါ်ခဲ့သည် - ကောင်းပြီ, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပြောပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါတစ် ဦး ကောင်းပြီ၊ မင်းကိုခေါ်မယ့်စာပေ၊ မင်းကိုငါတို့မပြောဘူး လစ်ဘရယ်, သငျသညျသူ့ကိုခေါ်တော်မူသောအရာကိုရဲ့ကျနော်တို့အိုင်တီတန်ဖိုးထားတယ်။
ရော်ဂျာကျောက်ခေတ်ဂျူရီလူကြီးရဲ့ anti-Trump လူမှုမီဒီယာပို့စ်များကိုပေါ်လာ
< start="0" dur="5.372"> Buck 166. Nike, BIG တရုတ်မေ့လျော့မသွားပါနဲ့ >
< start="5.373" dur="3.202"> NIKE, BIG China Exposure ကိုမမေ့ပါနဲ့။ >
< start="8.61" dur="1.566"> ထိတွေ့ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တွင်တစ်ဆယ့်လေးယောက်မြောက်လူတစ်ယောက်ရှိသည် >
< start="10.178" dur="3.201"> ကျွန်ုပ်တို့တွင် ROGER ကျောက်တုံးဖြစ်သည့်ဂျူရီတွင်တစ်ဆယ့်လေးယောက်မြောက်လူတစ်ယောက်ရှိသည် >
< start="13.381" dur="1.968"> ဂျော်ဂျီရွန်းကျောက်တုံးအမှု၌၎င်းသည်ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်သည် >
< start="15.383" dur="1.6"> သိသာထင်ရှားတဲ့ဘက်လိုက်မှု, အခြားအရာခပ်သိမ်းနှင့်ဒီ IS IS ထည့်သွင်းခဲ့သည် >
< start="17.018" dur="1.133"> အခြားအရာအားလုံးနှင့်ဤအရာသည်တရားမျှတမှုအတွက်ကောင်းကျိုးအတွက်မျှော်လင့်ခြင်းမဟုတ်ပါ >
< start="18.186" dur="0.499"> တရားရေးဌာနအတွက်ကောင်းကောင်းမရှာဘူး >
< start="18.687" dur="2.501"> ဌာန။ TWEET တုံ့ပြန်မှုလာ >
< start="21.222" dur="1.567"> အသစ်ထပ်မံပေါ်ထွက်လာသောလူမှုမီဒီယာ POST အပေါ်တုံ့ပြန်မှုသည်နှစ်ဆဖြစ်သည် >
< start="22.791" dur="1.132"> လူသစ်ကိုပြသသည့်လူမှုမီဒီယာအသစ် - အသစ်ထုတ်လာသောလူမှုမီဒီယာ >
< start="23.958" dur="2.535"> လူကိုပြသသောဂျူရီ၏ >
< start="26.494" dur="1.2"> ယခင် TRUMP အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်အားသပိတ်မှောက်သောဂျူရီ၏စွဲချက် >
< start="27.695" dur="3.202"> ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်များတွင်ယခင်ကသိမ်းထားခဲ့သောအကြံပေးကျောက်တုံးကိုသုံးထားသည် >
< start="30.898" dur="2.101"> ဆောက်လုပ်ရေးဌာနမှကျောက်ခဲသည်ဒီနည်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်သည် >
< start="33.033" dur="0.3"> ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီလူကိုဆန့်ကျင်။ >
< start="33.368" dur="2.434"> ပုဂ္ဂိုလ်။ Arizona SENATOR မာသသို့လာ >
< start="35.804" dur="2"> ARIZONA SENATOR MARTH MCSALLY, SENATOR, သူတို့နေဆဲပါ >
< start="37.838" dur="1.601"> MCSALLY, SENATOR, သူတို့နေဆဲသမ္မတအားဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားနေ, ငါ >
< start="39.474" dur="0.933"> သမ္မတကိုဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားနေငါဒီနည်းကိုစဉ်းစား - သူတို့ဖြစ်ကြသည် >
< start="40.408" dur="2.201"> ဒီနည်းကိုစဉ်းစားပါ - သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြိုးစားနေသည် >
< start="42.644" dur="1.233"> သူ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြိုးစားနေ, သူတို့သည်ပင်စကားပြောစကားပြောနေကြသည် >
< start="43.911" dur="1.968"> ဒီနည်းကိုကြောင့်ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုပြောနေတာတောင်ငါထင်ရဲ့ >
< start="45.88" dur="1.834"> ဒီနည်းကိုကြောင့်ငါ BACKFIRE သွားမယ့်ငါထင်သလား >
< start="47.715" dur="1.301"> Backfire သွားမလား? >> STUART, အိုင်တီရှိပြီးသား >
< start="49.05" dur="0.9"> >> STUART, အိုင်တီပြီးသားနောက်ကျော, သူတို့ကြိုးစားနေကြပါပြီ >
< start="49.984" dur="2.235"> နောက်ပြန်လှည့်, သူတို့ကဒီကိစ္စကိုသမ္မတအထံတော်သို့ချဉ်းကပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် >
< start="52.253" dur="1.835"> သမ္မတကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးကတည်းကသူတို့ကိုချဉ်းကပ်ရန်၊ >
< start="54.122" dur="1.567"> သူတို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရရှိခဲ့ကြပြီ, ရလဒ်ကိုသူတို့လက်ခံကြပြီမဟုတ် >
< start="55.69" dur="1.334"> ရလဒ်, သူတို့ကသူ့ကိုချပစ်ရန်ကြိုးစားနေသည် >
< start="57.025" dur="2.101"> သင် Ball ကိုသူ့ကိုထုတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားနေသင်မြင်နှင့်သူတို့အဖြစ် >
< start="59.16" dur="1.367"> သင်မြင်သည့်အတိုင်း BALLOT သူတို့သည်ကျော်ဖြတ်ပြီးသူတို့ဖြစ်နိုင်မည် >
< start="60.528" dur="2.735"> တစ်ချိန်ကကျော်ဖြတ်ပြီးသူတို့ကိုင်တွယ်နိုင်, အိုင်တီနောက်ခံ, >
< start="63.298" dur="1.133"> အိုင်တီကိုင်တွယ်, အိုင်တီနောက်ခံ, ARIZONA ပြည်သူတွေလွတ်လို >
< start="64.466" dur="1.767"> ARIZONA တွင်နေထိုင်သူများသည်ကုန်ကျစရိတ်နိမ့်ကျသည့်အခြေအနေသို့ရောက်နိုင်သည် >
< start="66.234" dur="2.602"> နိမ့်ကျသောဆေးဝါးကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ထောက်ပံ့မှု, ထောက်ပံ့ပေး >
< start="68.837" dur="0.633"> နောက်ထပ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေးသောဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ OR >
< start="69.504" dur="1.234"> အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပိုမိုရရှိနိုင်ရန် (သို့) လူများကိုသူတို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း >
< start="70.772" dur="1.134"> လူတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အလုပ်များကိုသူတို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ် >
< start="71.94" dur="1.4"> ထွက်နေသောယောဂီများဖြည့်စွက်, အမှုအရာကောင်းကောင်းနှင့် >
< start="73.375" dur="1.6"> အဲဒီမှာအမှုအရာသွားနေပြီနှင့်ငါတို့လုပ်ဖို့ရှိသည်နောက်ထပ်ရှိပါတယ် >
< start="75.01" dur="1.133"> ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကွဲပြားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လုပ်စရာများများရှိသေးသည် >
< start="76.178" dur="1.166"> ဒီနည်းကိုကိုယ်စားပြုတဲ့လူတွေအတွက်ကွဲပြားမှုဖြစ်စေရန် >
< start="77.345" dur="4.237"> ကိုယ်စားပြုသောဤယောက်ျားများမှာရပ်တန့်နေဆဲဖြစ်သည် >
< start="81.616" dur="0.633"> ယောက်ျားတွေဟာအန္တရာယ်များတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၊ >
< start="82.25" dur="2.768"> Syndrom, စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, Impachachment, အိုင်တီရယ်စရာပါပဲ။ >
< start="85.02" dur="1.233"> Impachment, ရယ်စရာပါပဲ။ စတီးဝပ် - ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြစ်တင်ဝေဖန်မှု >
< start="86.288" dur="1.667"> စတီးဝပ် - ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမအောင်မြင်သော Impachachment နှင့်ယခုပြောရမည့်စကားလုံး PELOSI သည် >
< start="87.956" dur="0.967"> ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ယခုအချိန်တွင်စပီကာ PELOSI အောက်ကိုမျှော်ကြည့် >
< start="88.957" dur="1.701"> သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်၏စီးပွားရေးအပေါ်နိဂုံးချုပ်ရန်မျှော်လင့်လျက်၊ >
< start="90.692" dur="1.634"> စီးပွားရေးအပေါ်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်, နိုင်ငံရေးကနေအစီရင်ခံစာရှိပါတယ် >
< start="92.36" dur="2.402"> ဒီနည်းကိုပြောသောနိုင်ငံရေးသမားတစ် ဦး မှအစီရင်ခံစာတစ်ခုရှိသည်, Nancy PELOSI >
< start="94.796" dur="3.503"> ဒီနည်းကိုပြောတာပါ၊ Nancy PELOSI ကအထူးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ် >
< start="98.333" dur="1.434"> ရှင်းပြရန်စီးပွားရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် HOSTED အထူး Speaker ၏တွေ့ဆုံ >
< start="99.801" dur="2.535"> စီးပွားရေးကိုအဘယ်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ရှင်းပြရန်စီးပွားရေးအကြံပေးနှင့်အတူ >
< start="102.37" dur="3.203"> စီးပွားရေးကိုအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းကြီးထွားစေသည့်အဘယ်ကြောင့်မဖြစ်သည့်အကြောင်းဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ပြောကြားရန် >
< start="105.607" dur="0.8"> အမှန်တကယ်အားဖြင့်ခိုင်မာတောင့်တင်းခြင်းမရှိဟုပြောဆိုခြင်းနှင့်သူတို့ MIAMI ကိုမည်သို့စွမ်းဆောင်နိုင်မည်နည်း >
< start="106.441" dur="3.803"> သူတို့မိမိမိကိုဘယ်လိုတောင်းဆိုနိုင်သလဲဆိုတာကိုစာတိုပေးပို့ပါ >
< start="110.245" dur="1.534"> ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ - မဲဆန္ဒရှင်များကိုအကြောင်းပြန်ပါ၊ >
< start="111.813" dur="0.266"> မဲဆန္ဒရှင်များ၊ ခင်ဗျားဘာထင်သလဲ။ >
< start="112.08" dur="2.869"> ဘာလဲ >> ငါအိုင်တီရယ်မောဖွယ်ထင်, ငါ >
< start="114.983" dur="2.168"> >> ငါအိုင်တီရယ်မောဖွယ်ထင်, သူတို့ထွက်လာရန်လိုအပ်ထင် >
< start="117.152" dur="3.836"> သူတို့တှငျ DC Bunker ထဲကထွက်ရန်နှင့်နားထောင်ရန်လိုအပ်သည်ထင်ပါစေ >
< start="120.989" dur="1.067"> DC ရှိ Bunker နှင့် Arizona ရှိအမေရိကန်များနားထောင်ပါ >
< start="122.057" dur="4.136"> အမေရိကန်များ, Arizona တွင် WE ရပြီကြင်ဖော်မဲ့မိခင်ရှိသည် >
< start="126.195" dur="2.601"> ရရှိခဲ့ကြသောကြင်ဖော်မဲ့မိခင်, အနိမ့်ဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း >
< start="128.798" dur="3.668"> HISPANICS, VETERANS, မိဘများ၏ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း, အနည်းဆုံးအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ် >
< start="132.468" dur="2.134"> သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ သူတို့၏မိဘများသည်နှစ် ၃၀ သက်တမ်းရှိသောကြောင့်ပျော်ရွှင်ကြရသည်။ >
< start="134.603" dur="1.367"> သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြောင့်နှစ် ၃၀ သက်တမ်းရှိတဲ့ကလေးငယ်ဟာအိမ်အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့ >
< start="135.971" dur="2.602"> KID အိမ်မှ ထွက်၍ အမေရိကန်လူမျိုး ၆၀% ကျော်ဖြင့်အလုပ်တစ်ခုရခဲ့သည် >
< start="138.574" dur="1"> အမေရိကန်လူမျိုး ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းမြင်သည်ဟုခံစားရသည် >
< start="139.575" dur="1.4"> တစ်ချိန်ကစီးပွားရေးနှင့်အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းမြင်မှုကိုခံစားပါ >
< start="140.976" dur="1.834"> စီးပွားရေးနှင့်အနာဂတ်, တစ်ချိန်ကလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်နှင့် >
< start="142.811" dur="1.367"> နောက်တဖန်, လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်နှင့်မဟာမိတ်များထဲကအတော်လေးရှိပါတယ် >
< start="144.179" dur="1.601"> အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာနဲ့မဟာမိတ်တွေများတယ်။ >
< start="145.781" dur="1.534"> အမေရိကမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ အိုင်တီသူတို့ရယ်စရာပါပဲ >
< start="147.316" dur="2.568"> သူတို့တစ်တွေတစ်ခုခုမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖို့ကြိုးစားနေရယ်မောဖွယ်ပါပဲ >
< start="149.885" dur="0.6"> ကွဲပြားခြားနားသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုကြိုးစားနေ။ >
< start="150.486" dur="0.933"> ကွဲပြားခြားနား။ စတီးဝပ် - ငါထဲကတစ်ဆယ့်နှစ်အရွယ် >
< start="151.42" dur="1.167"> စတီးဝပ် - သမ္မတတစ် ဦး မှတစ် ဦး မှာကျွန်ုပ်သည်သင်၏တစ်ယောက်ထဲမှ >
< start="152.588" dur="1.734"> သင်၏အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာများအနက်မှတစ် ဦး သည်ကျွန်ုပ်ဖတ်မည် >
< start="154.323" dur="1.801"> အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာများ, ငါအဆုံးသတ်, သင်တို့အဘို့အ TWE ဖတ်ပါလိမ့်မယ် >
< start="156.125" dur="2.001"> သင်တို့အတွက်နှစ်ဆ, အံ့သြဖွယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာငွေတောင်းခံရွှေ့ရွေ့ >
< start="158.127" dur="2.001"> အံ့အားသင့်စရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာငွေတောင်းခံမှုများရှေ့ဆက်အတွက်, ကွန်ဂရက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="160.129" dur="1.2"> BIPARTISAN ငွေကိုငါ့ဆီပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် >
< start="161.364" dur="1.767"> BIPARTISAN BILL ကိုကျွန်ုပ်၏စားပွဲသို့ပို့ခြင်း၊ >
< start="163.132" dur="1.434"> DESK, ငါသိ, အထွေထွေ, သငျသညျအနိမ့်ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးချင်တယ် >
< start="164.6" dur="1.634"> ပိုမိုနိမ့်သောဆေးညွှန်းသတ်မှတ်ထားသောမူးယစ်ဆေးဝါးစျေးနှုန်းများအတွက်၊ သင်အဆုံးသတ်လိုသည် >
< start="166.235" dur="1.5"> စျေးနှုန်းများ, သင်သည်အံ့သြစရာကုန်သွယ်မှုအဆုံးသတ်ချင်, ကြည့်ရှု MY >
< start="167.737" dur="1.066"> ဒီနေရာမှာဖြစ်ပျက်သောအခါငါအံ့သြစရာငွေတောင်း, ကြည့်ရှု, ငါ့မေးခွန်းဖြစ်ပါသည် >
< start="168.804" dur="1.334"> ဒီနည်းကိုဖွစျလာတဲ့အခါမေးခွန်း IS သင်ရနိုင်သလား >
< start="170.139" dur="1.267"> ဖြစ်ပျက်ရန်, သင်ယခုကွန်ဂရက်မှတဆင့်အိုင်တီရနိုင်သလား? >
< start="171.407" dur="2.501"> အခုတော့ကွန်ဂရက်တဆင့်? >> WE မှတဆင့်အိုင်တီရရန်ရှိသည် >
< start="173.91" dur="0.732"> >> WE အိုင်တီရရှိရန်ကွန်ဂရက်, စတီးဝပ်။ >
< start="174.676" dur="1.634"> ကွန်ဂရက်, စတီးဝပ်။ စတီးဝပ် - မင်းလား။ >
< start="176.345" dur="1.367"> စတီးဝပ် - မင်းလား။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလုပ်နိုင်သည် >
< start="177.713" dur="1.701"> >> ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံးဝဖြစ်နိုင်သည်၊ လူနာတစ် ဦး သည်လူနာတစ် ဦး နှင့်သဘောတူနိုင်လျှင်၊ \_ t >
< start="179.415" dur="2.134"> လူနာတစ် ဦး သည်လူတစ် ဦး သို့ရောက်သောအခါအတည်ပြုနိုင်သလား >
< start="181.55" dur="0.9"> တစ် ဦး ချင်းအရေးပေါ်ခန်းသို့သူတို့သွားရမယ့်အရေးပေါ်အခန်း >
< start="182.451" dur="2.602"> သူတို့ကမပေးသင့်သောအရေးပေါ်အခန်း, $ 10000 လ >
< start="185.087" dur="0.834"> အာမခံအတွက်ကြောင့်ဒေါ်လာတစ်သောင်းနောက်ကျသောငွေတောင်းခံလွှာကိုမယူပါနှင့် >
< start="185.955" dur="2.401"> နောက်ပိုင်းတွင်အာမခံကုမ္ပဏီများနှင့်ပေးသွင်းသောကြောင့် >
< start="188.391" dur="2.301"> ကုမ္ပဏီများနှင့်ပေးသွင်းသူများသည်ကွန်ယက်အတွင်းမှထွက်မထုတ်နိုင်ပါ >
< start="190.726" dur="1.601"> ကွန်ယက်အတွင်းပိုင်းအခြေအနေကိုမရှာဖွေနိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ >
< start="192.328" dur="1.601"> အခြေအနေ, ငါအိမ်သူအိမ်သားဆုံးရှုံးနှင့်အိမ်ရောင်းရောင်းသောသူကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးပါပြီ >
< start="193.93" dur="1.233"> သူ့အိမ်ကိုဆုံးရှုံးပြီးအိမ်ရောင်းရန်ဤစာစောင်တွင်; အိုင်တီအတွက်အချိန်ပါပဲ >
< start="195.165" dur="2"> ဒီစာစောင်ကျော်; ငါတို့အတွက်လှုပ်ရှားဖို့အချိန်တန်ပြီ၊ ဒီငါဟာငါပါ >
< start="197.166" dur="2.101"> ရွေ့လျားဖို့အမေရိကန်, ဒီနည်းနဲ့ငါက Cassidy ရဲ့ပံ့ပိုးသူပါ >
< start="199.268" dur="2.101"> CASSIDY BIPARTISAN ငွေတောင်းခံလွှာ၏ကမကထပြုသူ၊ >
< start="201.403" dur="2.368"> BIPARTISAN ငွေတောင်းခံလွှာ, သမ္မတရဲ့အနုပညာနှင့်အဆုံးအပေါ်အိုင်တီရယူပါ >
< start="203.773" dur="0.499"> သမ္မတ၏ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပြီးဆုံးသွားသောငွေပမာဏ။ >
< start="204.274" dur="1.399"> အံ့သြစရာငွေတောင်းခံ။ စတီးဝပ်။ ငါအိုင်တီအဆုံးသတ်ရမယ် >
< start="205.675" dur="1.434"> စတီးဝပ်။ ကျွန်ုပ်သည် SENATOR ကိုအဆုံးသတ်ရမည် >
< start="207.143" dur="0.8"> SENATOR, ငါမပြုမီ, ငါသည်သင်တို့ကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်တယ် >
< start="207.944" dur="1.333"> သင့်အားကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရန်ဤသတင်းထောက်အားတုံ့ပြန်မှုများစွာအတွက် >
< start="209.279" dur="1.5"> မိုက်ကရိုဖုန်းကိုထိုးဖောက်နေတဲ့သတင်းထောက်ကိုတုံ့ပြန်မှု >
< start="210.813" dur="1.835"> သင်၏မျက်နှာတွင်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုအဘယ်သူတိုက်ခိုက်နေသနည်း။ >
< start="212.682" dur="2.301"> သင်၏မျက်နှာနှင့်သင်သူ့ကိုခေါ်ခဲ့သည် - ကောင်းပြီ, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပြောပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါတစ် ဦး >
< start="214.984" dur="2.602"> ကောင်းပြီ၊ မင်းကိုခေါ်မယ့်စာပေ၊ မင်းကိုငါတို့မပြောဘူး >
< start="217.587" dur="0.766"> လစ်ဘရယ်, သငျသညျသူ့ကိုခေါ်တော်မူသောအရာကိုရဲ့ကျနော်တို့အိုင်တီတန်ဖိုးထားတယ်။ >